Dɛn Ne Onyankopɔn Ho Nokwasɛm? - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
11 Mprempren, Onyankopɔn te nka dɛn wɔ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase ne w’asetram no ho? Nea edi kan koraa no, Bible kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn “dɔ atɛntrenee.” (Dwom 37:28, NW ) Enti odwen nea ɛteɛ ne nea ɛnteɛ ho yiye. Okyi nneɛma bɔne biara. Bible ka sɛ tete no, bere a bɔne dɔɔso wɔ wiase no, “ɛyɛɛ” Onyankopɔn “yaw ne komam.” (Genesis 6:5, 6) Onyankopɔn nsakrae. (Malaki 3:6) N’ani da so ara nnye amanehunu a ɛrekɔ so wɔ wiase nyinaa no ho. Na Onyankopɔn ani nnye ho sɛ obehu sɛ nnipa rehu amane. Bible ka sɛ: “Odwen mo ho.”—1 Petro 5:7.
14 Sɛ wopɛ sɛ obi hu wo a, dɛn na wubetumi ayɛ? So woremmɔ wo din nkyerɛ onipa no? So Onyankopɔn wɔ din? Ɔsom ahorow pii bua sɛ ne din de “Onyankopɔn” anaa “Awurade,” nanso eyinom nyɛ ne din ankasa. Ɛyɛ n’abodin, sɛnea “ɔhene” ne “ɔmampanyin” yɛ abodin no. Bible kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ abodin ahorow pii. “Onyankopɔn” ne “Awurade” yɛ abodin no bi. Na Bible kyerɛkyerɛ nso sɛ Onyankopɔn wɔ din ankasa: Ɛne Yehowa. Dwom 83:18 ka sɛ: “Wo a wo din de Yahwe [Yehowa, NW ] no, wo nko ara ne ɔsorosoroni, asase nyinaa so.” Sɛ edin no nni wo Bible mu a, ebia w’ani begye ho sɛ wobɛhwɛ Nkekaho no na woahu nea enti a ɛte saa. Nokwasɛm ne sɛ Onyankopɔn din pue mpɛn mpempem pii wɔ tete Bible nsaano nkyerɛwee no mu. Enti, Yehowa pɛ sɛ wuhu ne din na wode di dwuma. Yebetumi aka sɛ ɔnam Bible so reda ne ho adi akyerɛ wo.
15 Onyankopɔn maa ne ho din a ɛkyerɛ nneɛma pii. Onyankopɔn din Yehowa no kyerɛ sɛ obetumi ama ne bɔhyɛ biara abam, na obetumi ayɛ biribiara a wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no.* Onyankopɔn din da nsow koraa. Ɔno nkutoo na okura saa din no. Yehowa da nsow wɔ akwan pii so. Ɔkwan bɛn so na ɛte saa?
21 Wobɛba abɛte nea enti a Bible kyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa Yehowa sɛ yɛn Agya no ase. (Mateo 6:9) Ɛnyɛ yɛn nkwa nko na efi ne nkyɛn, na mmom ɔpɛ sɛ yenya asetra a eye sen biara nso, sɛnea agya biara a ɔwɔ ɔdɔ bɛpɛ sɛ ne mma nya asetra pa no. (Dwom 36:9) Bible kyerɛkyerɛ nso sɛ nnipa betumi abɛyɛ Yehowa nnamfo. (Yakobo 2:3) Susuw ho hwɛ—wubetumi abɛyɛ amansan Bɔfo no adamfo!
Onyankopɔn din ankasa ne Yehowa. —Dwom 83:18, NW.
* Nea Onyankopɔn din no kyerɛ ne sɛnea wɔbɔ no no ho nsɛm pii wɔ Nkekaho no mu.
Dɛn ne Onyankopɔn Ho Nokwasɛm?—Ɔfã 2